पाल्पामा जङ्गली च्याउ खाँदा दुई बालिकाको मृत्यु, ८ जना घाइते ! - पाल्पामा जङ्गली च्याउ खाँदा दुई बालिकाको मृत्यु, ८ जना घाइते !
पाल्पामा जङ्गली च्याउ खाँदा दुई बालिकाको मृत्यु, ८ जना घाइते !
२०७6, २6 जेठ, 11:44:40 AM
पाल्पा । पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका–३ झिरुवासको सार्कीडाँडामा जङ्गली च्याउ खाँदा दुई बालिकाको मृत्यु भएको छ ।
बिरामीको नवलपुरस्थित मध्यविन्दु अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । शुक्रबार बेलुकी च्याउ खाएपछि शनिबार अपराह्नबाट बिरामी पर्न थालेका हुन् ।
वान्ता हुने, बेहोस हुने, अत्तालिने गरेपछि उनीहरुलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको थियो । बिरामीको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
साथीभाइको कुटपिटबाट रुपन्देहीको देवदहमा युवकको हत्या, ५ जना पक्राउ
जाजरकोट अस्पतालको सेवा अब सफ्टवेयर मार्फत
प्रहरी अस्पतालले राम्रो सेवा दिएपछि सर्वसाधारणको चाप बढ्दै